नेपालीहरुका लागि अर्को दुखद खबर, देशभर तरंग, अब के गर्ला ओली सरकार ? — Imandarmedia.com
नेपालीहरुका लागि अर्को दुखद खबर, देशभर तरंग, अब के गर्ला ओली सरकार ?
काठमाडाैं । बेलायतबाट आएका ५ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । यद्यपि नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस हो वा होइन भन्ने यकिन भइनसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियण्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) का अनुसार अहिले उनीहरु राजधानीको विभिन्न होटेलमा क्वारेण्टिन बसिरहेका छन् ।
तर उनीहरुलाई नयाँ प्रजातीको कोरोना हो होइन भन्ने बारेमा अहिले नै केहि भन्न नसकिने इडिसिडीका निर्देशक वासुदेव पाण्डेले बताए । उनका अनुसार नयाँ किसिमको कोरोना भाइरस भएको पत्ता लगाउन उनीहरुको जिन सिक्विनिङ गर्नुपर्छ ।
डाक्टर पाण्डेले भने, ‘तर बेलायतबाट आएकाहरु अथवा उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुलाई कोरोनाको लक्षण देखिए भने सचेत रहनुपर्छ ।’ यदि याे कोरोना बेलायतमा भेटिएको नयाँ प्रजातिको भए नेपलम अवस्था डरलाग्दो हुनसक्ने बिज्ञहरूको बुझाई छ ।
के हो बेलायतमा भेटिएको नयाँ कोरोना ?
जापान, स्पेन, फ्रान्स र क्यानडामा केही मानिसहरूमा पहिले भेटिएभन्दा धेरै संक्रमण जोखिम भएका कोरोना भाइरस फेला पारेको छ। यी मध्ये धेरै संक्रमित बेलायत यात्राबाट आएकाहरूसँग सम्बन्धित छन्।
ब्रिटेनमा हालै मात्र कोरोनाको नयाँ किसिमको संक्रमण पुष्टि भएको छ र सोका कारण लन्डन र दक्षिण इङ्ल्याण्डमा लकडाउन गरिएको छ। नयाँ भाइरस आफ्नो मुलुकमा ब्रिटेनबाट भित्रिएको भन्दै फ्रान्सले बेलायतसँग सीमा जोडिएको इण्लिस च्यानलबाट हुने मानव आवागमनमा रोक लगाएको छ।
नयाँ किसिमको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै विश्वका थुप्रै मुलुकले ब्रिटेनबाट आउने यात्रीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्। ब्रिटेनमा भएजस्तो संक्रमण निगरानी विश्वका थोरै राष्ट्रमा मात्र भएकाले नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस दुई सातासम्म संसारका अन्य ठाउँमा पहिचान हुनु अगावै पुगिसकेको ठानिएको छ।
ब्रिटिस वैज्ञानिकहरूले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार कोरोनाको यो नयाँ प्रकार संसारले हाल सामना गर्दै आएको भाइरसभन्दा बढी संक्रामक भएको पत्ता लगाएका छन्। यो भाइरस यसअघि भेटिएको भाइरसभन्दा ५६ प्रतिशत संक्रामक भएको अनुमान छ।
नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस पहिचान भएपछि जापानले गैरआवासिय विदेशी नागरिकको जापान प्रवेशमा रोक लगाएको छ। सोमबार मध्यरातबाट लागु हुने यो रोक जनवरीको अन्त्यसम्म कायम हुने जापानको राष्ट्रिय टेलिभिजन एनएचकेले जनाएको छ।
त्यस्तै स्पेनको राजधानीमा नयाँ कोरोना भाइरस भेटिएको जानकारी त्यहाँका स्थानिय अधिकारीले दिएका छन्। हालसम्म चार जनामा यसको पुष्टि भएको छ भने अन्य तीन जनालाई शंकाको घेरामा राखिएको छ।
फ्रान्सका अधिकारीका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति ब्रिटेनमा बस्दै आएका फ्रेन्च नागरिक हुन्। उनी डिसेम्बर १९ मा लन्डनबाट आएका थिए। त्यस्तै क्यानडाको ओन्टारियोका अधिकारीहरूले शनिबार दुई जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताएका छन्।
संक्रमितहरू दम्पति हुन र उनीहरूको कुनै यात्रा विवरण छैन। भाइरस स्वरूप परिवर्तन गर्नु सामान्य हो र हालसम्म परिवर्तित भएका भाइरसहरूमध्ये अधिकांश त्यति खतरनाक छैनन्।
तर बेलायतमा पुष्टि भएको नयाँ प्रकार भने २३ वटा म्युनटेसन भएको भाइरस हो, जसमा धेरैजसोले नयाँ किसिमले संक्रमण फैलाउने देखाएको छ। खोप विज्ञहरू हाल उपलब्ध खोपहरू यी नयाँ भाइरससँग पनि लड्न सक्षम हुनेमा विश्वस्त छन् यध्यपी यसको परीक्षण पुष्टि हुनु जरूरी छ।
हाल उपलब्ध खोप नयाँ प्रकारको भाइरससँग लड्न सक्षम भए नभएको जाँच चलिरहेको छ। युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूले आइतबारबाट फाइजर-बायोएनटेकले बनाएको खोप लगाउन सुरू गर्दैछन्। हंग्रेरीले शनिबारबाट नै खोप अभियान सुरू गरिसकेको छ।
यसैगरी अन्य नयाँ प्रकारका भाइरसहरूको पनि पहिचान भएको छ। तीमध्ये एउटा दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको छ भने अर्को नाइजेरियामा भेटिएको छ। नयाँ प्रकार भेटिएसँगै बेलायतले दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने बेलायत यात्राम प्रतिबन्ध लगाएको छ। दुई जनामा त्यहाँ भेटिएको भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपनि यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
यसैगरी जर्मनी र सिङ्गापुरमा पनि नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भेटिएको छ भने डेनमार्कले सो भाइरस आफ्नो मुलुकमा भित्रिए-नभित्रिएकोमा निगरानी गरिरहेको छ। निगरानीका क्रममा त्यहाँ नोभेम्वर १४ देखि डिसेम्बर १४ को अवधिमा ३३ जनामा नयाँ किसिमको संक्रमण पुष्टि भएको डेनिस अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
अमेरिकाले भने हालसम्म नयाँ किसिमको कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएको पुष्टि गरेको छैन्। उसले बिहीबार बेलायतबाट आउने यात्रुमा ७२ घण्टाको अवधिमा कोरोना भाइरसको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने बताएको छ। यो नियम सोमबारबाट लागु हुनेछ।
काेराेनाका कारण भाेकमरी बढ्दै, आम्दानी घटेपछि केहीलाई पेटभरि खान सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता : अध्ययन
कोभिड १९ का कारण बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा असर पर्नुको साथै पेटभरि खान नपाउने अवस्थासमेत आएको पाइएको छ । युनिसेफ नेपाल र शेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले नेपालका ८० भन्दा धेरै पालिकालाई समेटेर गरेको सर्वेक्षणअनुसार २० प्रतिशतले पेटभरि खान सङ्घर्ष गर्नुपरेको देखिएको छ ।
फोन तथा आईभीआरमार्फत गरिएको सर्वेक्षणमा ७७ वटै जिल्लाका १८ वर्षमुनिका बालबालिका भएका ६ हजार पाँच सय ८८ घरधुरीका अभिभावककलाई समेटिएको थियो । यसमध्ये २० प्रतिशतले कोरोना महामारीका कारण पेटभरि खान सङ्घर्ष गर्नुपरेको बताउँदा ११ प्रतिशत अभिभावकले पहिलेको तुलनामा कम खाने गरेको बताएका छन् ।
यस्तै ६१ प्रतिशत अभिभावकले पछिल्लो महिनामा कुनै आम्दानी गर्न सकेका छैनन् भने आम्दानी गरेकाहरूको पनि मासिक कमाइ १० हजारभन्दा कम भएकाले धेरैजसो परिवार गरिबीतिर धकेलिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
साथै लकडाउनपछि २० प्रतिशत अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाको पठनपाठन बन्द गराउन बाध्य भएको बताएका छन् । इन्टरनेटको पहुँचमा भए पनि विभिन्न समस्याका कारण बालबालिकाको पढाइ रोकिन पुगेकाे बताइएकाे छ ।
यस्तै जुलाई र अगस्ट महिनामा २० प्रतिशतले सरकारबाट कोभिड सहायता प्राप्त गरेकोमा लकडाउन खुकुलो भएपछि सहायता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या एक प्रतिशतमा झरेको छ भने सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम पनि २० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिरामी बालबालिकाको सङ्ख्या जुलाई महिनामा ७ प्रतिशत रहेकोमा अक्टोबरमा बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ ।
साथै १२ प्रतिशत परिवारले सरसफाइलाई चाहिने अत्यावश्यक साबुन र लुगा धुने पाउडरकाे अभाव रहेकाे बताएका छन् । २० प्रतिशत अभिभावकले बालबालिकालाई घरमै राखेर उपचार गर्ने गरेको बताएका छन् । एक चौथाइ अभिभावकले भने उपचारका लागि यातायात साधनकाे अभाव भएकाे बताएका छन् ।
यसैगरी घरेलु हिंसा पनि बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यस्तै, अगस्ट महिनामा नवजात शिशुको सङ्ख्या ७२ रहेकोमा अक्टोबरमा यो सङ्ख्या बढेर ८९ पुगेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
युनिसेफ नेपाल र शेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले २०७७ साल वैशाख महिनादेखि कोरोना सङ्क्रमणकालमा नेपाली महिला तथा बालबालिकामा के–कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ भन्ने बिषयमा नियमित सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म चार वटा सर्वेक्षण भइसकेका छन् ।
सर्वेक्षणमा सहभागी ६ हजार पाँच सय ८८ घर परिवारमा बालबालिकाका अभिभावकलाई टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरेर १० दिनको अवधिमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो ।